Simbi Simbi, Simbi Bridge, Simbi Curtain Wall - Honghua
Chigadzirwa & Zvirongwa zvePurojekiti
Simbi Curtain Wall
Simbi Simbi Zvikamu
Kufanirwa & Rukudzo
Tora samples yedu izvozvi!
Guangdong Honghua Kuvaka Co, Ltd. (ino inonzi kunzi Honghua) chikamu chekuvaka cheGuangdong Huayu Simbi Simbi Co, Ltd. Huayu irambi & inorema-simbi inogadzira base inovhara nharaunda ye 0.15 mamirioni emamirimita. Iko kugona kwegore kugadzirwa kwekambani kunogona kusvika matani mamirioni 0.15. Iyo kambani ine hunhu hwekutanga-kirasi Simbi Structure Mugadziri uye ndiwo akakosha ekugadzira zvigadziko muSouth China. Iyo kambani inotarisa mukugadzirisa tekinoroji yekutsvagisa yemhando dzakasiyana dzesimbi zvivakwa kugadzirisa tekinoroji kutsvagisa nekusimudzira uye ikambani inotungamira muiyi indasitiri. Sevabatsiri chikamu chekuvaka cheBoka, Honghua ane hunyanzvi hwekutanga-kirasi Simbi Structure Nyanzvi Contractor, wechipiri-kirasi Simbi Structure Dhizaini, yekutanga-kirasi Curtain Wall Professional Contractor, yekutanga-kirasi Kushongedza chirongwa Professional Contractor, yekutanga-kirasi Environmental Protection Project Muumbi, wekutanga-kirasi Foundation Project Kontrakta, yechipiri-kirasi Housing uye Kuvaka General Muvaki, wechipiri-kirasi Municipal Project Kontrakta, yevashandi masevhisi, nezvimwe.
Ona zvimwe Zvigadzirwa zvedu
Kuve nekirasi yekutanga kosi yesimbi yekugadzira simbi muChina.
Yakakwira simuka simbi yekutengesa chivakwa
Yakakwira-simuka simbi furati
Prefabricated njanji chiteshi simbi mamiriro
Chimiro horo yemitambo
Simbi inonoka masitepisi
Simbi sisitimu yemazhinji-storey pekugara
Basa revatengi, kugutsikana kwevatengi
Simbi simbi chivakwa
Simbi sisitimu yekuchengetera inowanzoitwa neakateedzana simbi mamiriro, kusanganisira simbi mbiru, simbi matanda, purlin zvichingodaro. Izvi zvinhu zvikuru zvinoumba chimiro chinotakura mutoro wedura. Nekuda kwehuremu hwakareruka uye kuvaka kuri nyore, pane kudiwa kukuru kweiyo imba yesimbi yekuchengetera. Iyo simbi strucutre zvakare ndiyo yakanyanya ...
Simbi pfupa rezvivakwa zvine nhurikidzwa dzakawanda muna Iye ... 2020-04-01
Iyo simbi pfupa resimbi yesimbi chivakwa (Nha. 7) muSenzhen Airlines Headquarter-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, kana Honghua, inotarisira kugadzirwa nekuisirwa. Kutenda Shenzhen Airlines uye Hunan Kuvaka zvakare. Imba-imwe-chivakwa chiri bui ...
verenga zvimwe >>
Simbi bhokisi girder yevanofamba netsoka kudarika b ... 2020-04-01
Mwedzi wapera kambani yedu iri kuita chirongwa chebridge yesimbi kubva kune yehurumende yekuvaka kambani. Mushure memazuva mazhinji ekurwa, simbi bhokisi girder yemugwagwa mukuru bhiriji yapera kusimudza. Iyo purojekiti iri muZhaoqing City, mudunhu reGuangdong. Kureba kweuyu mufambi tsoka-b ...
Chii chinonzi simbi portal furemu?
Portal mafuremu. Portal mafuremu anowanzo ari epasi-ekumisikidza zvivakwa, zvine macolamu uye yakatwasuka kana yakadzika matanda, akabatana nekukana-kudzivisa ...
Simbi furemu zvivakwa zvinovakwa sei?
Simbi furemu inzira yekuvaka ine "skeleton furemu" yematanda esimbi akatwasuka uye yakatwasuka I-matanda, akavakwa mugridhi yakakona ku ...
Nei uchishandisa simbi mamiriro?
Nekuti simbi mamiriro ine zvakawanda zvakanaka. Kutanga, simba rakakwira. Iyo yakakwira reshiyo yesimba kusvika pahuremu (iyo simba pasuniti uremu). Kechipiri ...
For kubvunza nezve zvigadzirwa zvedu, ndapota siya yako e-mail kwatiri uye utaure nesu mukati maawa makumi maviri nemana.